PaySketch: Uhlalutyo lwePayPal kunye neNgxelo | Martech Zone
NgoLwesibini, Septemba 2, 2014 NgoLwesibini, Septemba 2, 2014 Douglas Karr
Sinoogxa bethu kolu shishino abasebenzisa i-PayPal kuyo yonke imicimbi yabo. Iindlela zokuhlawula kunye neeprosesa zongeza intlawulo kwintengiselwano, ke I-PayPal yindlela elula, ethembekileyo ukuqokelela imirhumo kwimirhumo, ukhuphelo, kunye nezinye iintlawulo. Oko kwathethiyo, ujongano lwePayPal ayisiyiyo elula ukuhamba - ke ukufumana isixhobo sobukrelekrele kweshishini esinokukunceda ukubeka esweni, ukuhlalutya, ukuqokelela kunye nokunxibelelana nabathengi bakho kunokubonelela ngoncedo olukhulu.
Paysketch ibonelela ngesicelo esifikelelekayo kwidesktop yesicelo esikunceda ukulawula kunye nokubeka esweni ishishini lakho endaweni yokujongana ne-PayPal's interface enikezela kuphela ukuqonda kwintengiselwano. I-PaySketch ibonelela ngombono opheleleyo weakhawunti yakho kunye needashbhodi ezithile zentengiselwano, ukuthengisa, iintlawulo, abathengi, iimveliso kunye nokwenza ingxelo.
Zintathu izibonelelo eziphambili kwiPaySketch:
Uhlalutyo -I-PaySketch ibonelela nge-real-time PayPal Analytics ngolwazi, uqikelelo kunye nohlalutyo lomkhwa ukukunceda ukubeka esweni kunye nokuphucula ishishini lakho.
Ukubika Ukucoca, ukukhangela, ukujonga kunye nokukhuphela ukuthengiselana ngePayPal kwangoko. Jonga kwaye ubeke ingxelo phantsi kwintengiso, iimveliso kunye / okanye abathengi.
Ulawulo lweAkhawunti -Ukulandela umkhondo wentengiselwano, jonga ibhalansi yeakhawunti yakho, inkqubo yokubuyiselwa kwemali kunye nokuthumela imali.
Ukunika ingxelo ngePayPal
tags: abathengi bePaypalIdeshibhodi yokubhatalaukuhlawulwa kwentlawuloIimveliso zepalpalIngxelo yepaypaliingxelo zepalpalUkuthengiswa kwepaypalUtshintsho lwepaypalpaysketch
Sep 7, 2014 ngo-3: 13 PM
Enkosi ngencam uDouglas. IPaysketch ibonakala iluncedo kwaye inomdla. Ndizakuzama.